Dumarka oo jecel in sideedaan waxyaabood ay si joogta ah uga maqlaan Raggooda - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Dumarka oo jecel in sideedaan waxyaabood ay si joogta ah uga maqlaan Raggooda
Waxan halkaan maanta idinkugu soo gudbineynaa 8 waxyaabood oo lamaantaada ay jeceshahay inay si joogto ah kaaga maqasho.
1. “Isbedel ayaad ku sameysay nolosheyda”
Waxaa jira dadaallo wanaagsan oo ay xaaskaaga ku bixisay inay isbedel ku sameyso noloshaada, waana muhiim inaad ku qiimeysid dadaalladaas lamaankaaga/lamaantaada si ay usii laba jibaarto ama usii laba jibaaro.
2. “Waxaa tahay mudnaantayda”
Lamaankaaga/lamaantaada waa inay noqotaa mudnaantaada koowaad isla markaana aad dareensiisaa inay kugu weyntahay,waxana kasii wanaagsan in go’aanada inta aadan qaadan aad la tashataa.
3. “Ma heli karo qof kaa wanaagsan”
Ka dhig lamaankaaga/lamaantaada tan ugu wanaagsan dunida adigoo u sheegaya inaadan heli Karin qof u dhigma ama ka wanaagsan.
4. “ Waan jeclahay inaan kula joogo”
Goorma ayay ahayd waqtigii ugu dambeeyay oo xaaskaaga aad u sheegtid inaad jeceshahay la joogisteeda? Waa muhiim inaad mar kasta xasuusisid inaad ku raaxeysatid la joogisteeda/lajoogistiisa.
5. “ Sidee ayay ahayd maalintaada?”
Tani waa su’aal aad muhiim u ah oo loo baahanyahay in qof kasta uu weydiiyo lamaantiisa maalin walba. Weydiintaan aad weydiisay lamaantaada sida ay maalinteeda ahayd, ayaa muuqaal qurux badan iyo micno u yeeleysa xiriirkaaga.
6. “ Waanka xumahay”
Inaad tiraahdid waanka xumahay marka aad qaldantahay waa wax wanaagsan, waxay muujineysaa kaliya sida aad u qiimeysid xiriirkaaga, haddii aad qiimeysid xiriirkaaga waa inaad qirataa qaladkaaga oo raali galin aadka bixisaa.
7. “ Waan jeclahay marka aad waxaas sameysid”
Qiimeynta waxyaabaha yar waa arrin aad u qiimo leh, haddii aad jeclaatid waxyaabo yar uu lamaankaaga kuu sameeyo, ha hilmaamin inaad dareensiisid inuu ogaado inaad jeceshahay waxa uu kuu sameeyay.
8. “ Waanku jeclahay”
Waa inaadan marnaba ogolaan in maalin ay ku dhaafto adigoo lamaantaada/lamaankaaga u sheegin inaad jeceshahay, had iyo jeer xasuusi lamaankaaga/lamaantaada inaad jeceshaahy.